Myanmar rejects EU’s Draft Resolution on the situation of human rights in Myanmar at Human Rights Council – Ministry of Foreign Affairs
First, the EU’s justification for the draft resolution is mainly based on the one-sided narratives, highly politicized and seriously flawed reports of the FFM and the Special Rapporteur that Myanmar has categorically object.
Second, the draft resolution clearly demonstrates its intent to garner international pressure against Myanmar by passing one resolution after resolution and heaping mechanism over mechanism on our country. It containsanumber of paragraphs, based on sweeping allegations, aiming to impose unprecedented discriminatory scrutiny on Myanmar by abusing various UN mechanisms under the name of human rights. Today, Myanmar is under the scrutiny of multiple UN mechanisms.
Third, the tone and tenor of the draft resolution demonstratesatotal disregard for the dignity, sovereignty, and territorial integrity ofasovereign UN member state. It is seena“classic example” of double standards and, selective and discriminatory application of human rights norms onadeveloping country in democratic transition.
large number of paragraphs narrowly focus, with negative perspective, on the rights ofaparticular group in Rakhine. Myanmar will never allow any attempt that can have negative impact for the social cohesion and unity among different ethnic and religious communities in the country.
Fifth, the EU’s draft resolution sows the seeds of mistrust and further polarization not only among different communities in the country in particular in Rakhine but also between Myanmar and the international community. It is imbued with retributive and punitive undertone rather than seeking solution, understanding and reconciliation.
Sixth, the draft resolution deliberately ignored the threat of terrorism which is the real cause of present humanitarian situation. This calls foragreat concern with regard to the true intention and sincerity of the cosponsors.
China, Cuba and the Philippines voted against the resolution in support of Myanmar. The other7countries – Angola, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, India, Japan, Nepal and Senegal – did not support the EU’s resolution and abstained in the voting.
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတွင် အီးယူမှ တင်သွင်းသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းအား မြန်မာနိုင်ငံက ပြတ်သားစွာ ပယ်ချ
(၂၃-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ ဂျီနီဗာမြို့)
ဂျီနီဗာမြို့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ အကြိမ် (၄၀)မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ)က တင်သွင်းသည့် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းအား အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးမှုတစ်ရပ်ကို မတ်လ ၂၂ ရက်တွင် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းကို ပြတ်သားစွာ ပယ်ချခဲ့သည်။
ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအနေဖြင့်‌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ၌ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက ယင်းဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းအား မြန်မာနိုင်ငံမှ ပယ်ချရသည့် အဓိကအကြောင်းအရင်း အချက် (၇) ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်-
(၁) ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းသည် တစ်ဖက်သတ် ပြောကြားမှုများ၊ ပြင်းထန်သည့် နိုင်ငံရေးသွတ်သွင်းမှုများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံက ပြတ်သားစွာ ကန့်ကွက်ထားသည့် အချက်အလက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ (FFM) နှင့် အထူးအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းသူတို့၏ မှားယွင်းချက် များစွာပါရှိသော အစီရင်ခံစာများကို အဓိကအခြေခံထားကြောင်း၊
(၂) ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုပြီးတစ်ခု၊ ယန္တရား တစ်ခုပြီးတစ်ခုတို့ဖြင့် နိုင်ငံတကာဖိအားများ ပိုမိုကျရောက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်မှာ ထင်ရှားကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး အမည်တပ်၍ ကုလသမဂ္ဂ ယန္တရားမျိုးစုံကို အလွဲသုံးစားပြုကာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် မကြုံစဖူး ခွဲခြားဆက်ဆံ စစ်ဆေးမှုများ ကျရောက်စေရန် ရည်ရွယ်သည့်၊ စွပ်စွဲမှုများကို အခြေခံထားသော စာပိုဒ်များစွာကို ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းတွင် တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ ယန္တရားများစွာ၏ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကို ကြုံတွေ့နေရကြောင်း၊
(၃) ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းသည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အချုပ်အခြာနှင့် နယ်မြေတည်တံ့မှုတို့ကို လုံးဝအလေးမထားရာ ရောက်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းစ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး စံနှုန်းများသုံး၍ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ ဘက်လိုက်ခြင်းနှင့် စံနှစ်မျိုးဖြင့် ဆက်ဆံခြင်းကို ပြသနေသည့် ဥပမာ (classic example) တစ်ခုအဖြစ် မြင်တွေ့ရကြောင်း၊
(၄) ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော်လည်း စာပိုဒ်အများစုသည် အပြုသဘောမဆောင်ဘဲ ကျဉ်းမြောင်းသည့် အမြင်များဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူတစ်စု၏ အခွင့်အရေးအတွက်ကိုသာ အာရုံစိုက်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမျိုးပေါင်းစုံနှင့် ဘာသာရေး အသိုက်အဝန်းများအကြား စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် လူမှုအသိုက်အဝန်း သဟဇာတဖြစ်မှုကို ပျက်ပြားစေနိုင်သည့် မည်သည့် ကြိုးပမ်းမှုမျိုးကိုမျှ ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း၊
(၅) အီးယူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အသိုက်အဝန်းများ အကြားတွင်သာမက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း အကြားတွင်ပါ ပိုမိုနားလည်မှုလွဲမှားပြီး အမြင်ကွဲပြားအောင် မျိုးစေ့ချနေကြောင်း၊ ထို့ပြင် အဆိုမူကြမ်းသည် ဖြေရှင်းမှု၊ နားလည်မှုနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်မှု တို့ကို အဖြေရှာရမည့်အစား အပြစ်ပေးဒဏ်ခတ်လိုသည့် အငွေ့အသက်များဖြင့်သာ ပြည့်နှက်နေကြောင်း၊
(၆) လက်ရှိ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့် အဓိက အကြောင်းရင်းမှန် ဖြစ်သော အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းတွင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် လျစ်လျူရှုထားကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ပူးတွဲအဆိုတင်သွင်းသူများ၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ စိတ်ရင်းအမှန်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန် စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်း၊
(၇) မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတည်းကို ဦးတည်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း။
မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က အဆိုပါ အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်း L.19 ကို ပြတ်သားစွာ ပယ်ချကြောင်းနှင့် တရားမျှတမှုမရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုသည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စည်းနှောင်မှု ရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း အလေးအနက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းတွင် ပါဝင်သော အချို့စာပိုဒ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်မှုများစွာထဲမှ အချို့ကို အသိအမှတ်ပြု ကြိုဆိုထားသည်ကို တွေ့ရှိရသော်လည်း ရှေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အချက်အလက် မှားယွင်းမှုများ၊ အချုပ်အခြာအာဏာကို နိုင်ငံရေးအရ ကျူးကျော်ထိပါးသည့် စာပိုဒ်များက ပိုမိုများပြားနေကြောင်း၊ မကောင်းသည့် ရည်ရွယ်ချက်၊ ဘက်လိုက်မှုနှင့် နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့် နောက်ထပ် ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းကို ချမှတ်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ကူညီရာ မရောက်ကြောင်း အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် အီးယူနှင့် ပူးတွဲအဆိုတင်သွင်းသူများအနေဖြင့် စစ်မှန်သော စိတ်ဆန္ဒ ရှိမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် အပြုသဘောဆောင်သော ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပြုလုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ရှိကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်ရာတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့် ချဉ်းကပ်ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် စစ်မှန်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အရေးပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာအစိုးရနှင့် ပြည်သူများသည် ဖယ်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေး ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ရေးအတွက် ဆက်လက်၍ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန် ခိုင်မာစွာ ကတိကဝတ်ပြုထားသည်ကို ထပ်လောင်းအတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရေရှည်တည်တံ့သည့် အဖြေရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန် သန္နိဌာန်ချထားကြောင်း၊ ဤကိစ္စကို ဖြေရှင်းရာတွင် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်း၏ စိတ်ရင်းစေတနာ၊ မှန်ကန်သည့် အပြုသဘောဆောင်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်ကြိုဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်တွင် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် မှန်ကန်သောမူဖြင့် ထောက်ခံရပ်တည်ကြသည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းကို ကန့်ကွက်မဲပေးရန် ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအား မေတ္တာရပ်ခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်က အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းသည် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းမည့်အစား မြေပြင်အခြေအနေများကို ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အပါအဝင် အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်မှုများစွာကို အသိအမှတ်ပြုသင့်ကြောင်း၊ ကာယကံရှင် မြန်မာနိုင်ငံက ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းကို ပယ်ချထားကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အဝန်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို လေးစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းအား မဲခွဲရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းအား အဖွဲ့ဝင် ၄၇ နိုင်ငံပါဝင်သည့် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတွင် မဲခွဲခဲ့ရာ ကန့်ကွက်မဲ ၃ မဲ၊ ကြားနေမဲ ၇ မဲနှင့် ထောက်ခံမဲ ၃၇ မဲဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည်။ တရုတ်၊ ကျူးဘားနှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့က မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ရပ်တည်လျက် ကန့်ကွက်မဲ ပေးခဲ့ကြပြီး၊ အန်ဂိုလာ၊ ကင်မရွန်း၊ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ နီပေါနှင့် ဆီနီဂေါနိုင်ငံတို့ကလည်း အီးယူ၏ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းအား ထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ ကြားနေမဲ ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။